ညီလင်းသစ်: သူ့အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက်
Posted by ညီလင်းသစ် au 4.10.10
ကျွန်မလည်း အဲဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ဆိုရင် သူတို့ရွေးလိုက်တာ မှန်တယ်လို့ ယူဆတယ်။ ရေပိုက်ချောင်နေရင် တစက်ချင်းကနေတာ ရေစက်သေးသေးလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ရေတွေ အလဟသ ဆုံးရှုံးတာကို လူတွေ သတိမထားမိကြဘူး။ ဒီလိုမျိုး အိမ်တိုင်းလိုလို ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ရေတွေ ဘယ်လောက် ဆုံးရှုံးမလဲဆိုတာကို အသိပေးနေသလို ဓါတ်ပုံကလည်း အသက်ဝင်တယ်လို့ ခံစားရတယ်။
Félicitation!!!! J'aime la troisième photo parce qu'elle communique avec notre vie quotidienne.
ကျနော် အစ်ကို့ စာဟောင်းတွေ ပြန်ဖတ်ဖြင့်တိုင်း ဓာတ်ပုံတွေ သွားကြည့်ဖြစ်တယ် အရမ်းလှလို့ ဖိုတိုရှော့တောင်ထင်ရတယ် ဆုတောင်ရတယ်ဆိုတော့ အစ်ကို့လက်ရာတွေ မြောက်ပုံကိုတော့ သိသွားပြီး ကျနော်က ဒုတိယ ပုံကိုပိုကြိုက်တယ် ဆုရတဲ့ပုံကတော့ ကျနေတဲ့ ရေပေါက်ပုံလေးက တော်တော်ကိုအသက်ဝင်တာပဲ အဲ့တာကြောင့် ဆုရတာထင်တယ်နော့် ဓာတ်ပုံအကြောင်းမသိပဲ ၀င်ဆြာလုပ်သွားကြည့်တာ ဂုဏ်ယူပါတယ် အစ်ကို ။
ကိုယ်သာဆိုရင်လဲ နံပါတ် ၃ ပုံကိုပဲ ရွေးချင်တယ်...
Theme ရော Photography Skill ပါ အဲဒီပုံမှာ ထင်ဟပ်နေလို့ပါ... ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲဆိုတော့ Theme တင်မက Skill ပါ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်...
Congratulation ပါ...း))
"Sustainable development, Green energy, Environmental protection" တွေဟာ လူတဦးတယောက်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်စု တစုစီခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်နေပြီး တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို တာဝန်ကိုယ်စီယူပြီး ထိမ်းသိမ်းကြရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ တွေးမိတယ်။
အဲဒီအတွက် ကိုယ်ကိုတိုင်လဲ တတ်နိုင်သလောက် ကျင့်သုံးနေထိုင်ပြီး ကိုယ်နဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းကိုလဲ အခွင့်ရသလို ဆွဲဆောင်ဖြစ်တယ်။ ဒါလဲ ကိုယ့်ဘက်က တတ်နိုင်သလောက်လေး ကိုယ်ရှင်သန်ရာ ကမ္ဘာကြီးကို ထိမ်းသိမ်းတယ် ဆိုရမှာပေါ့နော်။
နန္ဒာလဲ သူတို့ ရွေးလိုက်တဲ့ နံပါတ်သုံးပုံကို ကြိုက်တယ်။
"Use but not waste" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပုံဟာ သိပ်လိုက်ဖက်ညီတာပဲ။
တခါတရံမှာ လူတွေ သတိမပြုမိတဲ့ အသေးအဖွဲ ကိစ္စလေးတွေဟာ "Sustainable Development" အတွက် ထိရောက်မှု့ရှိလို့ ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ ရေဘုံဘိုင်ခေါင်းက ရေတစ်စက်ချင်း ကျနေတဲ့ပုံကို အကဲဖြတ်ဒိုင်အဖွဲ့က ရွေးချယ်မှု့ မှန်ကန်စွာနဲ့ ရွေးလိုက်တာလို့ မြင်ပါတယ်။
အနုပညာ မျက်စိနဲ့ ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေဟာ အဓ္ဓိပ္ပါယ်ကို စကားလုံးပေါင်း များစွာနဲ့ ရေးပြ ရှင်းပြစရာမလိုပဲ စကားပြောတတ်ပါတယ်။
ဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုညီလင်းသစ်။ Keep it up!!!
အံ့သြစရာပဲ.. အမလည်း နံပါတ် ၃ကိုပဲ ရွေးတယ်..။
တတိယပဲ မဟုတ်ပါဘူး ငါ့မောင်ရယ်.. တတိယတောင်ရတာပါ..
Congratulation ko nyi! I always tell my son ur 3rd title.No wonder i like that photo.It deserved award.Go on bro.
Congratulations. အကြိုက်ဆုံးကို အစီအစဉ်အလိုက် ပြောရရင် ပုံ-၃, ၁, ၂ ပါ။
ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ ပုံနဲ့ ပြပွဲခေါင်းစဉ်နဲ့ အလွန်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီခေါင်းစဉ်အတွက် ဆိုရင်တော့ ဒီပုံရဲ့ impact က တခြားနှစ်ပုံထက် ပိုတာအမှန်ပါပဲ၊ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ...။
Merci beaucoup! Certes, celle-là exprime bien le gaspillage de notre vie! :)
ကျနော်လည်း အဲဒီပုံကို ကြိုက်တယ်၊ ဆုရတဲ့ပုံကို ပြန်ကြည့်တော့ အားနည်းချက်တွေ တွေ့နေရလို့ဗျ၊ တကယ်ဆို ဒိထက်ကောင်းအောင် ရိုက်လို့ရနိုင်ရဲ့သား နဲ့ဗျာ၊ ကျေးဇူးပါပဲ ...။
ဟုတ်ပါတယ်၊ Theme ရော Skill ပါအရေးကြီးပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်...။
ကျနော်တို့ တစ်ယောက်စီရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ ဖြုန်းတီးမှုကို ပြတဲ့နေရာမှာတော့ အဲဒီပုံက အခြားနှစ်ပုံထက် နဲနဲပိုပြီး “တာ”သွားတယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ၊ ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်ခင်ဗျာ...။
“ပဲ” နဲ့ “တောင်”... စကားလုံးလေးနှစ်လုံး ပြောင်းလိုက် တာနဲ့တင် လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လိုစိတ်ဓါတ်ခွန် အား ပြန်တက်လာစေနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိပြုမိစေလို့ ကျေးဇူး အထူးပါအမရေ့...။ :D
IMO, it is important to be aware of that borderline between use and waste in all aspects. Thanks for your encouragement, sis! :)
နှစ်သက်ရာဒီဂရီကို အခုလို နံပါတ်စဉ်တပ်ပြီး ပြောပြ သွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျနော့်အတွက် တန်ဖိုး ရှိလှပါတယ်...။
လာလည်တဲ့အတွက်ရော ချီးကျူးစကားအတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ...။
I'll chose the third one too.Focal point is not very strong in the other two picture.
ရေစက်ထဲက ပုံရိပ်ကို ထင်ဟပ်ပြနိုင်တာ
တွေကတော့ နံပါတ်၃ကိုကြိုက်ရတဲ့ အချက်တွေပါ။
I will choose No.3. Nice photo.